Soba: vidiyoon Kun Teedii Afroon Xoollay argamee looltoota gamachiisuu isaa hin argisiisu | Addis Zeybe - Digital Newspaper
Soba: vidiyoon Kun Teedii Afroon Xoollay argamee looltoota gamachiisuu isaa hin argisiisu
HaqCheck maxxansii vidiiyoo hubatee soba ta’uu isaa dhugoomseera.
Gaafa guyyaa Fulbaana 6 , 2014 ALI irra jalqabee Fuuli Yutubii, Toora-Intarneeta tokkoo fi Fuulli Fesbuukiin hordoftoota 484,277 ol qabu tokkoo “Teedii Afroo fi Lenjii’ota RIB damee Xoollay” jachuun vidiiyoo naaneessa turan. Hanga barruun kun maxxanfamutti Vidiiyoon Toora intarneeta irra jiru yeroo 20,900 ol ka ilallame yammu ta’u, Fessbuukii irrat moo yeroo 60 ol qoodame. Yutuubii irratis kuma tokkoo ol ilallameera.
Erga Onkolooleessa 24 2013 ALH irra jalqaabee humna Adda bilisuummaa Ummata Tigraay fi Mootumma Federalaa Itoophiyaa jeedduu loolli jiraachuun isaa ni beekkama. Maddi odeeffannoon adda-addaas namooonni baayyee leenjii loolaa fudhachuuf gara wiirtuu leenjii looltootaa akka seenaan gabaasuun isaanii ni bekkama. Artiistoonis garee wiirtuu adda-addaa deemuun raayyiichaa akka kakaasanis himameera.
Teedii Afroon Weellisaa beekkamaadha. Keessattuu Itoophiyaa fi Ertiiraa keessatti hafarsiitoota heddu qaba.
HaqCheck tambileenii vidiiyoo armaan olitti caqasaame huubateera. Tambileeniin kunis Suuraa tokkoo akka hin taaneefi suuraa adda-addaa waliitti makuun akka artiistiin Teedii Afroon Xoollayiitti sirbe fakkeessuun hojjatamuu isaa dhugoomseera.
Dabalataanis Manajara Teedii Afroo ka ta’e Geetaachoo Mangudday wa’ee vidiiyoo kana gafannee ture. Innis Soba ta’uu isaa nuuf mirkaneeseera.
Kanaafuu Vidiiyoon arman oliitti kasnee fi toora midiiyaa hawasaa irratti naana’e kun dhugaa irra fagoo waan ta’eef HaqCheck Soba jadhee ramadeera.